Madaxweyne Farmaajo oo si shaqsi ah ugu tacsiyeeyey qoyskii marxuum Tahliil Jimcaale Hubanne | Radio Gaalkacyo 88.2 FM
Madaxweyne Farmaajo oo si shaqsi ah ugu tacsiyeeyey qoyskii marxuum Tahliil Jimcaale Hubanne
Madaxweynaha Jamhuuriyada Federaalka Soomaaliya Mudane Maxamed Cabdullaahi Maxamed (Farmaajo) ayaa 24kii April 2017 kulan gaar ah la qaatay qoyskii marxuum Tahliil Jimcaale Hubanne oo habeenkii Isniinta soo galeysey ee 23kii April 2017 uu ku geeriyooday Muqdisho.
Madaxweyne Farmaajo ayaa aad uga murugooday markii uu maqlay in marxuum Tahliil uu shil gaari ah awgiis uu u geeriyooday. Tahliil Jimcaale Hubanne ayaa ka tirsanaa shaqaalaha Wasaarada Warfaafinta, ahaana shaqsi howl-kar ah, bulshadu jeceshahay, daacad ah, wadani ah. Madaxweyne Farmaajo iyo Wasiir Eng. Yarisow ayaa qoyska la kulmay ugana tacsiyeeyey geeridii naxdinta laheyd, una ballanqaaday qoyska in xaquuqdii marxuumka ay qoyska heli doonaan.
Madaxweyne Farmaajo ayaa horey u ballanqaaday in Dowladda iyo shacabka ay si dhow u wada shaqeynayaan, iyadoo dowladdu ay u gurman doonto shacabka Soomaaliyeed, kulanka maantana uu ka tarjumayo fulinta ballanqaadka Madaxweynaha ee ahaa inuu shacabka la murugoonayo, la xanuunsanayo, diyaarna u yahay inuu u gargaaro si dalka loo gaarsiiyo nabad, amni, kala danbeyn, bash-bash iyo barwaaqo.